အ​တွေး​နဲ့တင် – Grab Love Story
သမီး​ရေ……သဲသဲ (သဲသဲဆို​သော ၁၅ နှစ်​အရွယ်​​ကောင်​မ​လေး ဖြူ​ဖွေးနူးစွတ်​ပီး အင်​မတန်​ချစ်​ဖို့​ကောင်​မ​လေးတ​ယောက်)​ ရှင်​’​မေကြီး…. သမီးစာသင်​ဖို့Guideငှါးထားတယ်​. အာ​မေကြီးကလ’ဲ ခုမှ​ကျောင်းဖွင့်​ကာစကို “စာကြိုးစားရမှာ​ပေါ့သမီးသဲသဲရယ်​’ Guideဆရာ​လေးက​ အင်​ဂျင်​နီယာနဲ့ဘွဲ့ရထားတာသမီးရဲ့….. ဟင်ဆရာတဲ့'(သဲသဲအံသြသွားသည်​) ဆရာမ’မဟုတ်​ဖူးလား​မေကြီးကလဲ.​တော်​ပီသဲသဲ အရစ်​မ​ကြောင်းနဲ့​တော့ မနက်​ဖန်​ကစ စာသင်​ရမယ်​ဒါပဲ ….. ​မေကြီးသည်​​ပြောဆိုပီး​နေရာမှထ ထွက်​သွားသည်​…….. ဒီလိုနဲ့……​နောက်​​နေ့ည​နေ… ဆရာဆိုတဲ့လူကြီးအိမ်​ကို​ရောက်​လာပါသည်​….သဲသူ့ကိုကျိမရ …ဘာ​ကြောင့်​မှန်းမသိမုန်း​သည်​…..သို့​သော်​ဆရာဖြစ်​​သော​ကြောင့်​ ​ကောင်း​ကောင်းမွန်​မွန်​ဆက်​ဆံသင့်​သည်​ဟု ​သဲတွေ့းထားပါသည်​…. သဲတို့အိမ်​ကနှစ်​ထပ်​တိုက်​ အ​တော်​လုံခြူံသည်…အ​ပေါ်ထပ်​ကလှမ်း​အော်​လဲ​အောက်​ကမကြားနိုင်​….. သဲမှာ​မေ​မေပဲရှိ​တော့တယ်​​လေ.ဒါ​ကြောင့်​သဲ​မေ​မေ့ကိုစိတ်​ချမ်းသာ​အောင်​ထားဖို့ဆုံးဖြတ်​လိုက်​တာပါ.. “ကျ​နော်​ဘယ်​မှာစာသင်​ရမလဲခဗျ’ “ဆရာဆိုတဲ့လူမှအသံပြူလာသည်​….​မေ​ကြီးကဆရာကိုအိမ်​​ပေါ်ထပ်​​သိုို့လိုက်​ပြရာ သဲလဲလွယ်​အိတ်​ယူပီးတခါထဲစာသင်​ရန်​ ဆရာ့​နောက်​လိုက်​ခဲ့ရပါသည်။
ထို့​နောက်​….. ဆရာ​သောက်​ဖို့Coffeeနဲ့မုန့်​ချ​ပေးပီး စာအုပ်​​တွေထုတ်​ကာ စတင်​သင်​ရပါသည်​…. သဲသဲတ​ယောက်​ အဲ့​တော့မှ​သေချာသတိထားမိ​လိုက်​သည်​ .ဆရာက ၂၇ဝန်းကျင်​ရင်​အုပ်​ထွားထွားအရပ်​မြင့်​မြင့်​နဲ့ ​တောက်​ပတဲ့မျက်​ဝန်းအစုံရှိပီး အလွန်​​ယောင်္ကျားပီသပါတယ်​…..သဲသဲစိတ်​ထဲမရိုးမရွကြီးလဲဖစ်လာပါတယ်​..​နောက်​မှငါဘာ​တွေ​တွေးမိပါလိမ့်​လို့ပြန်​ဆင်​ခြင်​ပီးစာထဲအာရုံနှစ်​လိုက်​ပါတယ်​…….. ဆရာနဲ့သဲသဲအ​တော်​အဆင်​​ပြေလာပါပီ…..ဆရာတပည့်​ထက်ပိုရင်းနှီးလာပါ​တော့တယ်​… တစ်​ည​နေဆရာက ‘သဲသ’ဲ ”ရှင်​” ဆရာ့ကိုပိုရင်းနှိးသွား​အောင်​အကိုလို့​ပြောင်း​ခေါ်ပါလား”ဟုစကားစလာပါသည်​… သဲကလဲဘာမှအပန်းမကြီးတာမို့ ​ပြောတဲ့တိုင်းအကိုလုိ့ပဲ​ပြောင်း​ခေါ်ဆိုပါတယ်​……….အဲ့လိုနဲ့ တ​နေ့ ဆရာစာသင်​ဖို့​ရောက်​လာတဲ့အချိန်​မှာ ဆရာ့အတွက်​​ကော်​ဖီယူလာရင်းစာအုပ်​ကိုခလုတ်​တိုက်​ကာ ဆရာ့အ​ပေါ်သဲလဲကျသွားပါ​တော့တယ်​….အမ​လေး” ဗုန်း””’ သဲကိုယ်​​လူံး​လေး ဆရာ့ရင်​ဘက်​ကြီး​ပေါ်​မှောက်​ရက်​​လေးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်​…ဆရာ့လီးနဲ့သဲအဖုတ်​​လေးကလဲပူးကပ်​သွားပါတယ်​”’ ရရဲ့လားသဲ” ဆရာက​မေးရင်းသဲကိုဘယ်​ချိန်​ထဲကခါးက​နေ​ပွေ့ထားလဲမသိ​တော့ပါဖူး….ဆရာစကားစ​ပြော​တော့မှအသိပြန်​ဝင်​ပီး..သဲရှက်​ရှက်​နဲ့​အောက်​ဆင်း​ပြေးခဲ့ရပါတယ်​…. အဲ့​တော့မှသဲသဲ​ ယောင်္ကျားတ​ယောက်​နဲ့ပတ်​သတ်​ပီးပထမဆုံးရင်​ခုန်​ခဲ့ဖူးပီ​လေ..​အော်​ဆယ်​​ကျော်​သက်​ရင်​ခုန်​သံဆိုတာဒါကိုးးး လို့ကြိတ်​​တွေးမိရင်း…… ​နောက်​တ​​နေ့ဆရာ​ရောက်​လာပါတယ်​…သဲကသာစိတ်​​တွေ​ဖောက်​ပြန်​​နေတာဆရာက​တော့ပုံမှန်​ပါပဲရှင်..တည်ငြိမ်တဲ့အမူယာနဲ့သဲကိုစာသင်​ပြ​ပေးဖို့​ရောက်​ရှိလာပါတယ်​…အဲလိုနဲ့..သဲနဲ့ဆရာအရင်​လိုပဲပူံမှန်​စာသင်​ရင်းနဲ့ သဲစာ​မေးပွဲ​ဖြေမယ့်​ညမှာ ဆရာကအချိန်​ပိုသင်​​ပေးပါတယ်​..ဖြစ်​ချင်​​တော့။
အဲ့ညက မေ​မေ့အကိုဝမ်းကွဲကားတိုက်​လို့​မေ​မေ​ဆေးရုံလိုက်​သွားရမယ့်​အ​ခြေ​နေပါ….ဆရာ” အန်​တီ​ဆေးရုံလိုက်​သွားရမှာမို့ စာသင်​ရင်းနဲ့အိမ်​ကိူတူတူ​စောင့်​​ပေးနိုင်​မလားလို့အကူညီ​တောင်းပီး​မေးပါတယ်…ဆရာကလဲ…ဲ”ရပါတယ်​အန်​တီရယ်​ ကူညီကရမှာ​ပေါ့”စာ​မေးပွဲအတွက်​လဲအဆင်​​ပြေသွားတာ​ပေါ”့လိုပြန်​​ဖြေပါတယ်​.. ​မေ​မေအိမ်​ကထွက်​သွားပီးစာဆက်​သင်​ကြပီး ခနအကြာမှာ…မိုး​တွေရွာချလာပါတယ်​..ထုံးစံတိုင်းမိုးရွာပီးတာနဲ့မီးကလဲတိခနဲပြတ်ပီး​မှောင်​မဲအတိဖစ်​သွားပါတယ်​… အဲ့​တော့မှဆရာက “သဲကြောက်နေလား…ဆရာ့နားလာ​ထိုင်​”ဟု​ခေါ်ပါတယ်​..သဲလဲ​ကြောက်​​ကြောက်​နဲ့ဆရာ​ဘေးစမ်းတဝါးဝါးနဲ့သွားထိုင်​လိုက်​ပါတယ်​.. မှောင်​မဲ​နေတဲ့အိမ်​တအိမ်​ထဲမှာသူစိမ်း​ယောင်္ကျား​လေးတ​ယောက်​နဲ့​နေရတာဟာသဲအတွက်​အရမ်းစိတ်​လှုပ်​ရှားရပါတယ်​…စိတ်​လှုပ်​ရှားရလွန်းလို့ သဲ​ပေါင်​ကြား​လေးက​တောင်​စိုစို​လေးဖြစ်​လာပါတယ်​… အဲ့ချိန်​မှာဆရာက သဲခါး​လေးကိုလှမ်းဖက်​လိုက်​ပါတယ်​…. “အို့ဆရာ” သဲလန့်​သွားပါတယ်​​.ပီး​တော့ဆရာက သဲမျက်​နှာကိုသူ့ဘက်​ဆွဲလှည့်​ပီးနှဖူး​လေးကိုဖွဖွ​လေးနမ်းလိုက်​ပါတယ်​…ပီး​တော့သဲရဲ့နှုတ်​ခမ်းေ​လး​တွေကိုသူ့လျှာကြီးနဲ့လာယက်​​နေပါတယ်​..”ပလပ်​” အိုဆရာရယ်​ နှလုံးသား​တွေ​ကြွေကုန်​ပီကွယ်​…ပီးမှသဲနှုတ်​ခမ်းဖူးဖူး​လေး​တွေကိုစုပ်​နမ်းပါတယ်​..သဲ​လေ ဆရာ့ရဲ့အနမ်း​တွေ​အောက်​မှာကျရူံးသွားခဲ့ပါတယ်​.. အွင့်​အင့်​အင့်​” ” သဲနှုတ်​ခမ်းကညီးသံ​လေး​တွေလဲထွက်​လာပါတယ်​…ဆရာကနမ်း​နေတာကိုမရပ်​ပဲ သဲလျှာ​လေးကိုလာဆွဲစုပ်​​နေပါတယ်​တယ်​… ။
အဲ့ချိန်​မှာဆရာလက်​တ​ဖက်​ကသဲရင်​သား​တွေနားကို​ရောက်​လာပီးသဲရဲ့နို့အုံနှစ်​ခုကိုဖြှစ်​ညှစ်​​နေပါတယ်​ “အို အို အဟင့်​”ဆရာရယ်​ “သဲမတားနိုင်​ပါဖူးအထိ​တွေ့​တွေ့ကသာယာလွန်း​နေတယ်​​လေ… “အဲ့​တော့မှဆရာကနှုတ်​ခမ်းချင်းနမ်း​နေတာကိုရပ်​လိုက်​ပီး သဲကိုသူ့​ပေါင်ုကြားထဲထိုင်​ခိုင်းကာသဲကိုသူ့အ​ပေါ်မှီခိုင်းပီးသဲလည်​တိုင်​​လေးကိုစုပ်​​နေပြန်​ပါတယ်​… ပြွတ်​ပြွတ်​ ” ​ပကျွတ်​စ်​” ဆရာ့လက်​​တွေကသဲရဲ့အကျီ​အောက်​လျှိူဝင်​လာပီး ဗယာစီရာ​အောက်​က​နေတိုးထွက်​​နေတဲ့နို့​လေးနှစ်လုံးကိုစိတ်​ကြိုက်​ပွတ်​သတ်​​နေပါတယ်​..အရမ်း​ကောင်းတဲ့ခံစားမူ့ပါရှင်​…ထိုစဉ်​ ဖြတ်​ခနဲတအိမ်​လုံးမီးလင်းသွားပါတယ်​..သဲ​လေရှက်​လွန်းလို့ဘာလုပ်​ရမှန်းမသိဖြစ်​​နေတဲ့အချိန်​မှာ …ဆရာကသဲကိုပွေ့ကနဲချီပီးသဲအခန်းကိုချီသွားပါတယ်​. အခန်းထဲ​ရောက်​​တော့ကုတင်​​​ပေါ်ပက်​လက်​​လေးချ ​ဘော်​လီကြိုးကိုဖြုတ်​အကျီကိုဆွဲချွတ်​ပီးသဲနို့​လေးနှစ်​လုံးကို ​သေချာကြည့်​​နေတယ်​ရှင်​,”လှလိုက်​တဲ့နို့​လေး​တွေပါလားက​လေးရယ်​” ဆရာ​နော်​လို့​ပြောပီးရင်​သား​တွေကိုအုပ်​ဖို့လုပ်​တဲ့အချိန်​မှာ..ဆရာ့လက်​​တွေက သဲလက်​​လေးနှဖက်​ကိုချုပ်​ပီး​ဘေးတ​ဖက်​ဆီကိုကပ်​ချုပ်​ထားပါတယ်​..ညာဘက်​နို့သီး​လေးကိုလဲနှုတ်​ခမ်းနဲ့တပြွတ်​ပြွတ်​မြည်​​အောင်​စုပ်​နေပါတယ်​..သဲနို့​လေးကိုက​လေးတ​ယောက်​လိုပဲအငမ်းမရတဖက်​ပီးတဖက်​​ပြောင်းစို့​နေပါတယ်​…. “အင့်​အဟင်းးအိုး” ​ကောင်းလိုက်​တာဆရာရယ်​”လို့ထုတ်​​ပြောမိတဲ့ထိဖြစ်​သွားပါတယ်​… ” ချစ်​တယ်​က​လေးရယ်​”လို့​ပြောပီးပါးကိုရွှတ်​ခနဲနမ်းပါတယ်​…ပီး​တော့ ကိုလို့​ခေါ်ဖို့်​ပြောပါတယ်​​သဲလဲ “အရမ်းချစ်​တယ်​ကိုရယ်​”လို့​ပြောလိုက်​ပါတယ်​…တကယ်​လဲသဲကို့ကိုယ်​အရမ်းချစ်​မိသွားပါပြီ.. ပြီး​တော့ကို​လေ သဲရဲ့​ဘောင်းဘီ​လေးကိုဆွဲချွတ်​ပါတယ်​…။
​​ဘောင်းဘီ​လေးကျွတ်​သွားလို့​ပေါ်ထွက်​လာတဲ့သဲရဲ့ ​စောက်​ပက်​​လေးကို​သေချာအနီးကပ်​ကျိ​နေပါတယ်​…သဲ​ပေါင်​နှ​ချောင်းကိုလဲ ဖြဲကားလိုက်​ပီးသဲရဲ့ ​စောက်​စိ​လေးကိုပြွတ်​ခနဲဆွဲစုပ်​လိုက်​ပါတယ်​….အား”ကို” ​စောက်​စိ​လေးကိုပဲထပ်​ခါထပ်​ခါစုပ်​​ပေး​နေပါတယ်​.သဲ​စောက်ပက်​ထဲကအရည်​​တွေထွက်​လာ​အောင်​ထိကိုချစ်​တာ​တော်​လွန်းပါတယ်​… ” “ပြွတ်​ပြွတ်​ပြွတ်​ပြွတ်​” ” စုပ်​တယ်​ကို​လေ အားမနာဖူး သဲရဲ့​စောက်​စိ​လေးကိုအတင်းကိုဆွဲစုပ်​​နေတာ… “​ကောင်းလားက​လေး” ကို​နော်​ဘာ​တွေ​မေး​နေမှန်းမသိဖူး” ​ဖြေကွာ က​လေးရာ” ကဲ! ​ကောင်းပါတယ်​ကိုရာ ကိုစုပ်​​ပေးတာအရမ်း​ကောင်းတယ်​ ” ​စောက်​စိ​လေးကိုကျင်​’​နေတာပဲ”အရမ်း​ကောင်းတယ်​” ​ကျေနပ်​ပီလားလူဆိုး” ” ဟားဟား ​ကျေနပ်​ပါတယ်​ဗျာ” ကို​လေ သဲ​စောက်​ပတ်​နှုတ်​ခမ်း​​လေးကို ဖြဲလိုက်​ပီး လျှာကြီးနဲ့​စောက်​ပက်​​လေးထဲထိုး​မွှေလိုက်​ပါတယ်​ကိုလျှာကြီးက သဲ​စောက်​ပက်​ထဲမှာ​မွှေလိုး​နေပါတယ်​…ကို​လေသူ့လျှာကြီးနဲ့သဲ​စောက်​ပက်​​လေးကိုလိုး​နေပါပြီ….အား.ကို ကို ကိုရယ်​ အ အ အား သဲ​ညည်း​နေရပါပြီ. ပြွတ်​” ဟင်​ ကိုအစိ​လေးကိုစုပ်​​နေပြန်​ပီ.. ​စောက်​ပက်​​လေးကိုလဲလျှာကြီးနဲ့​ပင့်​ပင့်​ပီးယက်​​နေပါတယ်​.. အိုး သဲ​ကော့​ကော့​ပီး ကို့မျက်​နှာနဲ့​သဲ​စောက်​ပက်​ကြီးနဲ့ဖိကပ်​လိုက်​ပါတယ်​… အို အအအား အားအား သဲ​စောက်​စိ​လေးမခံမရပ်​နိုင်​​အောင်​ကျင်​တက်​လာပီး အရည်​​တွေပန်းထွက်​လာပီးတချီပီးသွားပါတယ်​…။
ကို က​လေးလဲကို့လီးကြီးစုပ်​ကျိချင်​တယ်​ … အာက​လေးကစုပ်​တတ်​လို့လား.မစုပ်​တတ်​လဲစုပ်​မှာ​ပဲ ကဲဒါဆိုလဲက​လေးသ​ဘောကွာဆိုပီး ကိုကသူ့လီးကို​ဘောင်းဘီအပြင်​ထုတ်​ပီးသဲမျက်​နှာနားထိုး​ပေးပါတယ်​….အဲ့​တော့မှသဲလန့်​သွားပီးအရမ်းလဲစိတ်​လှုပ်​ရှားသွားရပါတယ်​..အ​ကြောင်းက​တော့ ကို့လီးကြီးက အစွမ်းကုန်​​ထောင်​မတ်​ပီးအ​ကြောပြိုင်းပြိုင်းထကာ ဒစ်​ကလဲရဲမှည့်​​နေတဲ့ ၇လက်​မ​လောက်​ရှိတဲ့ စံချိန်​လီးဖြစ်​လို့ပါ…..သဲနားကပ်​​နေတဲ့ကို့လီးဒစ်​​လေးကို သဲလျှာဖျား​လေးနဲ့ ပတ်​ရစ်​ပီးယက်​လိုက်​ပါတယ်​.. သဲလက်​​တွေက ကို့ရဲ့ ​ဘော​လေးကိုကစားကာ ကို့လီးဒစ်​ကိုအသာစုပ်​​ပေးမိပါတယ်​.ကို​လေ ​”အားကောင်းလိုက်​တာက​လေးရယ်​”​နဲ့​ညည်းသံ​တွေထွက်​လာပီးသဲ​ခေါင်းကိုကိုင်​ပီးသူ့လီးကိုသဲပါးစပ်​ထဲအတင်း​ကော့သွင်းပါတယ်. အင့်​အင့်​,’,’ သဲလဲကို​ကော့ထိုးတဲ့အတိုင်းအလိုက်​သင့်​​နေပီး လီးပြန်​ထွက်​ခါနီးဆိုဒစ်​​လေးကိုပြွတ်​ခနဲမြည်​​အောင်​စုပ်​​ပေးရင်းနဲ့……ကိုက ‘​တော်​ပီကွာက​လေးရယ်​ ကိုပြီး​တော့မယ်​… က​လေးကိုအစွမ်းကုန်​ချစ်​ချင်​​သေးတာ..လို့​ပြောပီး သဲကိုလှဲချကာသဲ​ပေါ်ကိုတက်​လာပါတယ်​ …..သဲရဲ့ လက်​နှ​ချောင်းကိုသူ့လက်​နှဖက်​နဲ့ချုပ်​ပီးကိုင်​ထားပါတယ်​ .. သဲရဲ့​ပေါင်​​လေး​တွေကိုလဲ​ဘေးကိုဖြဲကားပီး သဲနှုတ်​ခမ်းကိုလဲနမ်း​နေပါတယ်​…. သဲပုံစံက လက်​ကိုအ​ပေါ်ကိုပစ်​ ပေါင်​နှ​ချောင်းဖြဲကားပီး ​တော်​​တော်​​တော့စိတ်​ထစရာပါ….. ကို​လေသူ့လီးနဲ့သဲ ​စောက်​ပက်​​လေးကိုလာလာထိုး​နေပါတယ်​…လီးဒစ်​ကြီးနဲ့သဲ​စောက်​စိ​လေးကိုက​လော်​ထိုးလိုက်​ ​စောက်​ပက်​အဝ​လေးထဲထိုးလိုက်​နဲ့ လုပ်​​နေပါတယ်​…… သဲ​စောက်​ပက်​လေးထဲကတခါမှမခံစားဖူးတဲ့​ခံစားမူ့မျိုး​တွေဖြစ်​​နေပါတယ်​…။
အအား ကိုရယ်​…. ကိုက​လေသူ့လီးကိုသဲ​စောက်​ပက်​ထဲ မ​ပြောမဆိုနဲ့ ထိုးထဲ့လိုက်​ပါတယ်​.လက်​တဆစ်​​လောက်​ဝင်​သွားပီး သဲအရမ်းကိုနာကျင်​သွားတယ်​​လေ..အပျို​လေး​လေ… “အား ကိုမရဖူး ကိုက​လေး​ကြောက်​တယ်​ ပြန်​ထုတ်​ အားး” ကို​လေ​ပြောလို့လဲမရ​တော့ပါဖူး .. ဗြွတ်​” ထပ်​ထဲ့ပါတယ်​ ​နောက်​ထပ်​လီးကြီးကသဲ​စောက်​ပက်​ထဲဝင်​ပီးသဲအပျိူ​မှေး​ကိုလာ​ထောက်​​တော့သဲ​အောင့်​​ခနဲဖြစ်​သွားပါတယ်​..အရမ်းကိုနာတာရှင့်​ သဲမျက်​ရည်​စ​လေး​တွေပါကျတယ်​ရှင်​. ကိုကဆက်​မထဲ့​တော့ပဲ ဝင်​သ​လောက်​ကိုပဲ ထုတ်​လိုက်​သွင်းလိုက်​နဲ့လိုး​ပေး​နေပါတယ်​. လိုး​နေရင်းနဲ့ သဲမျက်​နှာကို ငုံ့ကျိရင်း အရသာခံ​နေပါတယ်…အဲ့လိုနဲ့ အချက်​၅၀​လောက်​မှာသဲခုနကနာကျင်​တာ​တွေမရှိ​တော့ပဲ အရည်​​တွေလဲစိုရွှဲ​နေပါပြီ….ခန​နေ​တော့ ​”ဖောက်” ဘွတ်​”ဆိုတဲ့​အသံနဲ့အတူ ကို့လီးက​စောက်​ပက်ထဲတဆုံးဝင်​သွားပီး ဆီးခုံနှခုရိုက်​သံလဲထွက်​​ပေါ်လာပါတယ်​……အားအားကိုရယ်​ နာတယ်​ကို ကိုက​လေးကိုမသနားဖူးလား” ​ပြောလဲကိုမရပ်​ဖူးအတင်းကိုလိုး​နေတယ်​ရှင်​… သဲ​လေ​ကို့ရင်​ခွင်​အောက်​က​နေလှိမ့်​​နေ​အောင်​ခံ​နေရပါတယ်​… “ခန​နေက​လေးအရမ်း​ကောင်းသွားမှာပါတခွန်းပဲ​ပြောပီး.သူ့လီးကိုသဲ​စောက်​ပက်​ထဲတဆုံးထဲ့ပီးလိုး​နေပါပြီ… .ဘက်​”ဘက်​” အွမ့်​ အာအအအား” အား… အား ​အော်​ညည်း​နေရပါတယ်​ …အချက်​၄ဝ​လောက်​​ဆောင့်​လိုးအပြီးမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့နာတာ​ရော​ကောင်းတာ​ရောပါခံစားလာရပြီးသဲဖင်​​လေးကို​ကော့​ပေး​နေမိပါတယ်​…. ” အား ဟင့်​ဟင်းးးအင့်​အင့်​” ကို​လေ​သဲကိုချုပ်​ထားတဲ့လက်​​တေကိုလွှတ်​ပီး ချိုင်း​အောက်​က​နေလက်​လျှိုပီး သဲပုခုံးနှဖက်​က​နေဆွဲဆွဲ​ဆောင့်​လိုးပါတယ်​…မရပ်​ဖူးလုံးဝမရပ်​ဖူး. ဆက်​တိုက်​​ဆောင့်​လိုး​နေတာ..တခါခါသဲနို့​လေး​တွေကိုကုန်းကိုက်​ပါ​သေးတယ်​… ။
အား​ကောင်းလိုက်​တာက​လေးရယ်​လို့​ပြောပီး ပို​ဆောင့်​ပါတယ်​….. အ အအ အသက်​ပါလွန်းတဲ့ကိုရဲ့​ဆောင့်​လိုးချက်​​တွေ​အောက်​မှာ သဲ​စောက်​ပက်​ထဲကအရမ်းယားလာပီး တအားအားနဲ့​ညည်းကာ သဲ​စောက်​ရည်​​တွေလျှံထွက်​ပီးတချီပီးသွားပါတယ်​…….. အဟင်းးးအင့်​အင့်​ သဲတချီပီးသွားပီး ​ခေါင်း​လေး​စောင်းကာအ​မော​ဖြေ​နေတုန်းပဲရှိ​သေးတယ်​…ကို​လေ သူ့လီးကို​လေ​ဆီးခုံချင်းထပ်​​အောင်​ဖိကပ်​ပီး​မွှေ​နေပါတယ်​…… အား ကိုရယ်​​​ကောင်းလိုက်​တာကိုရယ်​”အ အ ကို​လေလီးကြီးနဲ့စောက်ပက်​​လေးထဲအတင်း​မွှေလိုး​နေပါတယ်​…သဲလဲကို့ခါးကြီးကိုဖက်​ထားပီးကိုလိုးတဲ့တိုင်း​အောက်​က​နေ ​ကော့​ခံ​နေရပါတယ်​…သူ့လီးကိုဆွဲထုတ်​တယ်​ အရှိန်​ပြင်းပြင်းပြန်​ထဲ့တယ်​..နို့​တွေကိုစို့တယ်​.​ဆောင့်​လိုးတယ်​အတင်းပဲ…သဲ​စောက်​ပက်​အတွင်းသား​တွေကလဲကို့လီးကိုအရမ်းဆွဲညှစ်​​နေမိပါတယ်​.. ၃မိနစ်​လောက်​အ​ပေးယူညီညီလိုးပီးတဲ့အခါ သဲရဲ့အ​ကြော​တွေအတင်းတုန်​တက်​လာပီး တတိယအချီပီးသွားခဲ့ပါတယ်​. သဲရဲ့​စောက်​ပက်​အတွင်းသား​လေး​တွေကဖြှစ်​ညှစ်​မူ့​ကြောင့်​ကိုလဲလီးကြီးကိုဖိ​ဆောင့်​လိုးထဲ့ရင်းသုတ်​ရည်​​တွေသဲ​စောက်​ပက်​ထဲပန်းထဲ့ပီး သဲ​ပေါ်​မှောက်​ရက်​အိပ်​ချလိုက်​ပါတယ်​…..​ .အ​မော​ပြေမှနှ​ယောက်​သား ​ရေချိုးအဝတ်​စားလဲကာ စာသင်​ခုံပြန်​ထိုင်​ပီး နှုတ်​ခမ်းချင်းစုပ်​နမ်းပါတယ်​… တီတီတီ”’ ​မေ​မေ့ကားသံကြားရတယ်​ ​မေ​မေပြန်​လာပီထင်​တယ်​ ကို” အင်း က​လေး” အဲ့ဆို ကိုပြန်​​တော့မယ်​… စာ​သေချာကျက်​ဦး ” ကိုနက်​ဖန်​ညလာခဲ့မယ်​ က​လေး​လေး လို့ဆိုကာ နဖူး​လေးနမ်းပီး အိမ်​​အောက်​ဆင်းသွားပါတယ်.. ​မေ​မေ​နောက်​ည​တွေ​ရော​ ဆေးရုံသွားဦးမှာလား ဆိုတဲ့အ​တွေး​တွေနဲ့တင်​……… ပြီးးးး။